Ukuguquka kwesimo sezulu kuzothinta ezokuvakasha kanye nemvelo yasolwandle | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu njengokukhuphuka kwamazinga olwandle, amazinga aphezulu okushisa kwamanzi, ukuphakama kwamagagasi, kanye nokuvama okwandayo nokuqina kwezehlakalo ezimbi kuzothinta ezokuvakasha kanye nemvelo yasolwandle.
Le miphumela yokuguquka kwesimo sezulu sezivele zikhona oLwandle iMedithera, ikakhulukazi engxenyeni yeValencia. UMiguel Rodilla yisazi sezinto eziphilayo esivela ePolytechnic University yaseValencia futhi uphawule ukuthi zonke izakhiwo, izindawo ezihamba phambili kanye nogu lwaseValencia kuzofanele ziguqule ukubukeka kwazo kwamanje ukuze zihambisane nale miphumela yokuguquka kwesimo sezulu.
1 Shiya lolwandle
2 Ukwanda kokufa kwezinhlobo nokuzivumelanisa nezimo
Into yokuqala ukuzivumelanisa nokukhuphuka kwamazinga olwandle. Ukwenza lokhu, kungcono ukuzivumelanisa neminyaka futhi ushintshe isakhiwo kancane kancane, ukuze izindleko zezomnotho zingathuki noma ziqonde ngqo. Ukushiya indawo esebe lolwandle kuyinto eza kuqala ngoba usongo alugcini nje ngokwenyuka kolwandle, kepha ngamanzi amaningi, izivunguvungu zizobhubhisa konke okusendleleni yazo.
Mayelana nokwanda kwamazinga okushisa wamanzi olwandle, sinokunyamalala kwezinhlobo eziningi ezijwayelekile kanye nokuvela kwezinye izinhlekelele eziningi ezivela ezindaweni ezikude njengamanzi asezindaweni ezishisayo noma uLwandle Olubomvu.
IMedithera izwela ikakhulukazi esimweni se-acidification esiqhutshwa ukuguquka kwesimo sezulu, ethatha ukwanda kobumuncu bamanzi, ngenxa yokwanda kwesikhutha emkhathini. Lokhu futhi kubangela ukwanda okusobala kokuhlukaniswa kwamanzi. Kuqukethe ukuthi kunobunzima obukhulu emanzini ukwazi ukuxuba, okuholela enkingeni yokutholakala kwezakhi.
Ukwanda kokufa kwezinhlobo nokuzivumelanisa nezimo
Ngenxa yezizathu ezibalulwe ngenhla, ukwanda kokufa kuqoshwe ezinhlotsheni eziningi ezinjenge-gorgoni nezinye izinhlobo ezinjenge-calcareous algae zinobunzima bokuphila (lokhu kungenxa yokuthi ulwelwe ludinga ukugxila okuphezulu kwe-calcium carbonate engasatholakali ukwanda kwe-CO2 emanzini).
Ukwanda kolwandle izoguqula amabhishi kanye noshintsho kumvamisa nobukhulu beziphepho izolimaza futhi idale izinkinga ezinhlakeni ezisogwini. Ukwanda okuncane nje kuleli zinga kungathinta kakhulu i-aquifer yasogwini futhi kudale izinkinga zokutholakala kwamanzi ahlanzekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu kuzothinta ezokuvakasha kanye nemvelo yasolwandle